Moms kuraira - Bezzia | Bezzia
Kana paine chimwe chinhu chinoita kuti vakadzi vasarudzike, kugona kwavo ivai vanaamai. Ndosaka kana nguva ino yasvika, isu tese tinoda kuve pamusoro pebasa uye ita nepatinogona napo. Sezvo isu tisingafanire kuzviita tega, kubva kuBezzia tinoda kuendesa ruzivo rwedu pachinhu ichi uye nekupa consejos uye matipi anozokubatsira iwe kupa vana vedu iyo yakanyanya fundo uye hupenyu hunogoneka.
Pakati pemazano ekuva amai, tichaona maitiro ekutarisana nematanho akasiyana emwana, matambudziko anogona kumuka nekutaura kana zvirwere uye kufungisisa maitiro ekugadzirisa godo pakati pehama kana kutamba neshamwari.
kubudikidza Tony Torres inoita 1 zuva .
Kana gore idzva rechikoro rava kupera, inguva yekugamuchira nekukoshesa mamakisi anotyisa, mamakisi iwayo ...
Ndinoziva sei kana ndichifanira kuendesa mwana wangu kuchipatara?
kubudikidza Tony Torres inoita 2 mazuva .
Kuziva kana yave nguva yekuendesa mwana kuchipatara inogona kuve imwe yeakanyanya…
Matanho matatu ekurumurwa zvine ruremekedzo
kubudikidza Tony Torres inoita 1 mwedzi .
Kana yasvika nguva yekurumurwa, kutya kusingaverengeki, kusava nechokwadi uye kunetseka zvinomuka. Kune rimwe divi, manzwiro echisikigo anoita sekuti ...
Zvese izvo amai vatsva vanoda kuziva
Izvi ndizvo zvese izvo amai vatsva vanoda kuziva kuti vanakidzwe nehumai hunofadza. Nekuti dzimwe nguva, kunyanya…
Nguva yekufambisa mwana kubva pamubhedha kuenda kumubhedha?
Kubvisa mwana kubva pamubhedha kuenda kumubhedha kunogona kushungurudza, kuvabereki uye iwe pachako…
Matambudziko akasiyana ekuyamwisa
Kuyamwisa chipo chehupenyu, chikafu chakanakisa chinogona kugashirwa neachangozvarwa uye nzira…
3 mazano ekudzivirira cavities muvana
kubudikidza Tony Torres inoita 2 mwedzi .
Caries inowanzoitika muvana, chaizvoizvo, ndiyo inonyanya kunetsa yemuromo muhuduku. Izvi…
Kunhuwirira kwakashata muvana, zvikonzero nekudzivirira
Vana vanogonawo kunhuwa uye zvinogara zvichikonzerwa nezvikonzero zvinogona kudzivirirwa. Kunyangwe zvingaite sekuti...
Mazano erunako anokurumidza kunanamai vakabatikana
kubudikidza Tony Torres inoita 3 mwedzi .
Kuva amai hakupesani nekutarisira kune chekuita nerunako, kana kuti hazvifanirwe kudaro. Tarira…
hutano hwepabonde mushure mekuita pamuviri
Kana kusununguka kwave pedyo, vakadzi vanowanzofunga nezvemarudzi ese ezvinhu, kunze kwekudzosera…
Matipi Ekutsvaga Basa Mushure meMaternity
Kutsvaga basa mushure mekuva amai kunogona kuve kwakaoma, zvakawandisa muchokwadi. Hazvisi nyore kuti vakadzi vawane…